ဂျူးမလား - ဝီကီပီးဒီးယား
Joomla ဆိုတာကတော့ free ,opensource content managemetn system တစ်ခုပါ။ Joomla မှာ features တွေ မြောက်များစွာပါဝင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ များပြားလှပါတယ်။ RSS feeds, print ထုတ်လို့ရတဲ့ စာမျက်နှာ , news flashes , blogs, polls , website searching နှင့် ဘာသာစကားများစွာ ပါရှိပါတယ်။ Joomla ဟာ GPL Licesed ယူထားပါတယ်။ သူဟာ Mambo ရဲ့ fork ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ သူ့ကို PHP programming lanaguage နဲ့ရေးသားထားပြီး MySQL database ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
The Joomla Project Team
၁၇ ဩဂုတ် ၂၀၀၅ (၂၀၀၅-၀၈-၁၇)
3.4.8 / ၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅; ၅ နှစ် အကြာက (၂၀၁၅-၁၂-24)
10.5 MB (compressed) 28.8 MB (uncompressed)
Joomla က Mambo ရဲ့ fork ကနေ ဆင်းသက်လာပါတယ်။ 2005 တုန်းကတော့ Mambo ဟာ Miro International Pty Ltd ရဲ့ trademarked အနေနဲ့ တည်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ project တွေကို ဥပဒေရကာကွယ် ပိတ်ပင်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ International Pty Ltd ဆိုတာကတော့ non-profit foundation တစ်ခုပါ။ development team ဟာ အဲဒီအချက်ကို မနှစ်သက်ပဲ open source အနေနဲ့ တည်ရှိချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် developement team ဟာ OpenSourceMatters ပြီး users , developers, web developers, web designers တွေအတွက် တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက project team ရဲ့ခေါင်းဆောင်က Andrew Eddie , A.K.A "MasterChief" (15 Aungust 2007 မှာ အဖွဲ့ထဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်) ပါ။ တနေ့ကို လူအယောက် ၁၀၀၀ လောက်ဟာ opensourcematters.org forum ထဲကို ဝင်ရောက်ကြပြီး သူတို့ Development Team ကို အကူအညီ အားပေးခြင်းတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ 1 September, 2005 မှာ "Joomla" ဆိုတဲ့ နာမည် အသစ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Joomla ဆိုတာ Swahili ဘာသာ ရဲ့ jumla ကို phonetic spelling (အသံထွက်ကို english လိုရေးခြင်း) အရ ရေးထားတာပါ။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ "all together" ဒါမှမဟုတ် "asawhole" လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ပထမဆုံး Joomla 1.0.0 ကို 16 September, 2005 မှာ စတင်ပြီး release လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Mambo 4.5.2.3 ကို security fixes အပြင် အခြားအရာများကို ထည့်သွင်းပြီး re-branded တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Core Developers တွေက ဒီလိုဆိုပါတယ်။ Joomla 1.5 ဟာ မကြာခင်မှာ ရေးသားလို့ပြီးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ PHP5နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အဲဒါကို 2006 က ပြောကြားခဲ့သော်လည်း 21 July 2007 မှာသာ RC1 version ကို release လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 1 September 2007 မှာတော့ RC2 ကို ထုတ်ခဲ့ပြီး6October 2007 မှာတော့ RC3 ကိုထုတ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Joomla 1.5 ကိုတော့ 22 January 2008 တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Joomla ဟာ Packet Publishing ကချီးမြင့်တဲ့ Packet Publishing Open Source Content Management System Award in 2006 နဲ့ 2007 ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
Joomla package မှာ အမျိုးမျိုးသော အစိတ်အပိုင်းမြောက်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ Joomla ဟာ Module တွေ ထပ်ဖြည့်နိုင်ပြီး extension များ ထည့်သွင်းခွင့်အပြင် အခြားအရာများနှင့် ပေါင်းစည်း လုပ်ကိုင်ခြင်းများလည်း ပါရှိပါတယ်။
Extensions ဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ ဥပမာအားဖြင့် WikiBot ဆိုတဲ့ extension ဟာ Joomla ရဲ့ Artical မှာ Wikitags များနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ Aricle မှာ ပါတဲ့ hyperlinks တွေဟာ auto-create dyanmic hyperlinks တွေပါ။ အဲဒီ link ကို နှိပ်လိုက်ရင် သက်ဆိုင်ရာ Wikipedia aritcle ကိုဖော်ပြပေးပါတယ်။ Joomla Extension Directory တွင် extension ပေါင်း 2,200 ကျော်ရှိပါတယ်။ Joomla Extensions Directory ဆိုတာကတော့ OpenSourceMatters က runs ထားတဲ့ offical extensions's directory တစ်ခုပါ။
Components တွေဟာလည်း webmasters တွေကို site တစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာ မြန်ဆန်စေရန် အကူအညီပေးပါတယ်။ Community site လား ၊ Company Site လား ၊ E-Commerence site လား ၊ဘယ်လို site ပဲလာလာ components တွေကို လွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Modules ကတော့ site မှာ display အတွက်ပါ။ Calendar လား။ နာရီလား။ Google AdSense ထည့်မလား။ ကိုယ့် site မှာ ဖော်ပြဖို့အတွက် Moudle များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Module တွေကို အများအားဖြင့် ဘေးနားက navigator တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။
Joomla ဟာ offical သာမက unoffical comunity site များ မြောက်များစွာတည်ရှိပါတယ်။ July 2007 မှာ offical Joomla Forums မှာတင် threads ပေါင်း 200,000 ရှိခဲ့ပြီး post ပေါင်း 1 million ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ members ပေါင်း 138,000 ကျော်တို့ဟာ ဘာသာစကား ၄၀ ကျော်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Unoffical site တွေဟာလည်း ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးနှင့် လွှင့်တင်ထားပါတယ်။ Unoffical web developers တွေဟာလည်း extensions များ ၊ web templates များကို စီးပွားဖြစ် ရောင်းချပြီး အချို့ကတော့ Freelance customization services လုပ်ကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Template တွေကို Zip file နှင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ Joomla အတွက် extension များ ၊ component များ ၊ moudle များကို zip file နဲ့ install လုပ်ရပါတယ်။
Joomla extension ဆိုသည်မှာ ဂျူးမလား ဖြင့်ဖန်တီးထားသော ဝက်ဆိုဒ်အား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အပိုထပ်ဖြည့် အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် extension သုံးမျိုးရှိသည်။
Offical Joomla! website
↑ Joomla! 3.4.8 Released။ Joomla.org (24 December 2015)။ 25 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျူးမလား&oldid=449673" မှ ရယူရန်
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၈:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၈:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။